Nicholas Kay: Somalia way ka baxday Marxaladda dalka Guul-daraystay, ee way soo kabanaysaa, – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ergayga Xilka kasii degaya ee QM u qaabilsan Somalia Nicholas Kay, oo Wareysi siiyay Wakaaladda Wararka AP ayaa sheegay in Somalia ay kasoo baxday marxaladii Dal Guul-daraystay, kadib markii uu horumaro ka gaaray saddexdii sano ee lasoo dhaafay dhinacyada amaanka iyo dowladnimada.
Nicholas Kay, ayaa tilmaamay in Dowladda Federaalka ah ee Somalia wax badan uu qabsoomay sanadihii lasoo dhaafay ee ay jirtay, balse ay jiraan howlo badan oo ay kamid yihiin in dalka la gaarsiiyo Doorasho 2016-ka iyo in Al shabaab laga saaro Deegaanada ay ku harsan yihiin.
Wuxuu sheegay in wali ay jirto Khatarta Al shabaab, balse aysan Somalia ka weecin karin wadada ay cagta saartay ee dhanka soo celinta amaanka iyo kala danbaynta & dowlad dhisida.
Nicholas Kay, ayaa xusay in hanaanka siyaasada Somalia oo meel wanaagsan oo Guul ah marayo, islamarkaana ay Hogaamiyaasha dalka ay kawada xaajoonayaan Mustaqbalka Somalia iyo Doorashooyinka.
“Ma jiraan dalka Somalia hogaamiye kooxeedyo, u dagaalamayo qabiil, ee waxaa jiro Madaxweyniyaal Maamul Goboleedyo kuwaasi oo Khilaafaadkooda qaab wadahadal ah ku dhamaysta, halka ay qori adeegsan lahaayeen, waxay ay ka qeyb qaadanayaan Nabada ee kama shaqeeyaan kala qeybinta iyo burburka dalka sida lamid ah kuwii hore,” ayuu yiri Nicholas Kay.
Nicholas Kay, ayaa hoosta ka xariiqay in Doorashooyinka Baarlamaaniga iyo mid madaxweyne ee Somalia ay dhici doonaan waqtigooda loogu talo galay ee dabayaaqada sanadka 2016.
Ergayga QM ee Somalia Nicholas Kay, ayaa ugu baaqay Hogaanka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya inuu xushmeeyo Dastuurka dalka, oo uusan samaynin wax mudo korarsi ah marka la gaarao 2016-ka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay Bishii Juun in aysan dalka Somalia ka dhici karin Doorasho Qof iyo Cod ah oo Shacabka ka qeyb qaadanayaan sanadka 2016, isagoo sabab uga dhigay caqabadaha dhanka amaanka.